Imbuyekezo yeendaba zeNtlalo kutyalo mali awulinganisi | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 26, 2014 NgoLwesibini, Agasti 26, 2014 Douglas Karr
Inyaniso iyaxelelwa, uninzi lweenkampani endikhe ndasebenza nazo zinobunzima ekulandeleleni nasekulinganiseni ukubuya kutyalo mali xa kuziwa kwimidiya yoluntu. Kukho iindlela ezimbalwa ezisisiseko zokuvelisa ixabiso kwimizamo yeendaba zentlalo yombutho wakho:
Ungathini umthamo wezithuthi kwishishini lakho ukuhlawula kwi-Pay Per Click? -Kuba amagama aphambili kunye neendleko zokuhlawula ngokucofa nganye zipapashiwe, ungadibanisa amagama akho aphambili kwi kubahlalutyi kwiindleko zentlawulo ngokunqakraza ngokwemigaqo efanayo. Dibanisa amanani kwaye uhlala unebali elimnandi kakhulu lokuxelela umbutho wakho malunga nemali oyigcine kwinkampani.
Ungakanani umthamo wentengiso onokuthi ubonise ngokuthe ngqo kwimidiya yoluntu? -Ukulandelela ukuthengisa ngokuthe ngqo kwimithombo yeendaba zentlalo yindlela eqinisekileyo yomlilo yokubonisa ukubuyela kutyalo mali. Okubandakanyiweyo koku, ewe, ziinjini zokukhangela- eziya kuthi ziqhube isixa esikhulu sezithuthi kwinkampani yakho kwimidiya yoluntu.
Uninzi lwezentengiso kwi-Intanethi kunye neengcali zemidiya yoluntu zibona kufutshane. Iziphumo zembuyekezo kutyalo-mali zingaphaya kokucofa ngqo. Enye ye EzikaDavid Armano Imizobo evela kwiminyaka edlulileyo yenye endiqhubeka nokwabelana ngayo:
The imbuyekezo encedisayo kutyalo mali akukho lula ukulinganisa, kodwa ikho. Umyalezo wam kunye nabaxumi kukuba sinako ukuqala ngokulinganisa imbuyekezo kutyalo-mali ngeendlela ezimbini zokuqala - kodwa ziya kubakho iindlela ezininzi apho inkampani yakho iya kubona ukubuya kutyalo-mali lwayo kwimidiya yoluntu:
Ukuba yinkokeli yokucinga kwishishini lakho -Ukuba awucingi ukuba ukuthengisa kunokuza ngokufumana igama lakho kolu shishino, uyaphazama. Isitshixo kwimidiya yoluntu songeza into yomntu kwi-brand kuba iyakha ukuthembana. Ithemba lisisiseko kwimpumelelo yeshishini. Nje ukuba uqale ukuthatha inxaxheba kwimidiya yoluntu, uhlala umenywa ukuba uthethe kumzi-mveliso nakwiinkomfa zamaqabane, iminyhadala, iiwebhu, njl.
Ukwakha ubudlelwane bobuqu kunye nabaThengi bakho - kunzima ukushiya abantu esikhula sibathanda. Abantu ngamanye amaxesha yiglue oyifunayo kubudlelwane beshishini ukugcina abathengi. Ayizizo zonke iinyani kunye namanani, amaxesha amaninzi yinto encinci eyongezelelweyo eyenziwayo ngabantu. Ngabasebenzi abenza umohluko kunye nemidiya yoluntu ikuvumela ukuba ubone ngasemva kwegama kwaye uqhagamshele buqu nabantu abakwishishini.
Ilizwi lokuthengisa ngomlomo -Ingqinwe njengenye yezona ndlela zisebenzayo zokuthengisa ishishini, kodwa ayisiyonto inokwenziwa ngokungeyonyani (uninzi luzama). Kwincoko yemidiya yoluntu, ndincoma iinkampani, iimveliso kunye neenkonzo nanini na ndinako. Oku kuhlala kukuziphatha kwinethiwekhi-cela uncedo okanye ukhuthaze inkonzo kwaye abantu basasaze igama!
Ukwakha igama -Udumo yiyo yonke into ekwi-intanethi, kwaye yenza igama elihle kwindawo yakho, kwinethiwekhi yakho yoluntu, nakwiindawo zabathengi bakho nakwiinethiwekhi zentlalo sisiseko sentembeko esiya kuthi senze ishishini. Ukuthembela kubaluleke kakhulu kuyo nayiphi na intengiselwano yeshishini, kwaye kulula ukoyisa imicimbi yokuthembana ngokudibanisa ubuqu nabantu ngasemva kophawu.
Igunya loKwakha -Kunye nokwakha igama, wakha nembali ngee-injini zokukhangela ezilinganiselwe kokubini kwizicatshulwa nakwi-backlinks. Olo dumo luqhubekayo, olufanelekileyo kwizihloko ezithile kunye namagama aphambili, luya kuqhubeka nokuhambisa umxholo owabelana nawo kunye neesayithi ozibhalela phezulu kwiziphumo zeinjini yokukhangela. Ukukhangela ngumthombo omkhulu wokubuyela kwintengiso kwi-Intanethi kutyalo-mali. Musa ukukhohliswa-impumelelo yakho kwimithombo yeendaba zentlalo kakhulu kwigunya olakhayo ngeinjini zokukhangela.
Ukuthengisa ngokungathanga ngqo -Abantu abaninzi abaphanda kwiwebhu baya kufunda, bashiye, bafunde, bashiye, bafunde, bashiye, emva koko babuyele bazibandakanye. Ukuba ukufundwa kwenziwa kwibhlog kodwa uguquko lwenzeka kwindawo yakho ye-ecommerce okanye kwindawo yecandelo, ngamanye amaxesha akunakwenzeka ngewebhu kubahlalutyi ukubonisa ukutyelelwa ngokuthe ngqo kwimidiya yoluntu. Inyani yile yokuba uninzi lwethu luqhagamshelene ngeendaba zosasazo kodwa wenze ishishini nam ngqo ngaphandle kokukhankanya ibhlog yam ... kodwa ibikhona kwaye yenze impembelelo.
Ukonga iindleko -Ukuba abathengi bakho bafunda iibhlog zakho, unokuba nefuthe elibonakalayo kwinani lenkonzo kunye neendleko zolawulo lweakhawunti ngokubafundisa kwi-Intanethi. Imidiya yokuncokola ihlala iphakathi koninzi. Endaweni yokubhala i-imeyile ukuphendula umthengi, ngewuyibhalile kwi-Intanethi kwaye wayibeka ebantwini. Kunzima ukulinganisa umsebenzi bekungafuneki ukuba uwenze- kodwa ukhona!
Umxholo kunye neMiyalezo - yonke imihla inkampani yakho ethatha inxaxheba kwimidiya yoluntu lusuku lokufunda kwabasebenzi bakho, ukuziqhelanisa nokwenza umyalezo wakho kunye nokuwazisa. Okukhona mna thetha, thethana, kunye nebhlog malunga nemidiya yoluntu kunye nefuthe layo kumashishini, kulula kum ukunceda amathemba amatsha kunye nabaxhasi baqonde indlela yokuyisebenzisa. Ndithatha inxaxheba kwincoko, ndifunda ezinye izinto ezithethwa ziingcali, ndibona oko kuphumelele kwaye kungaphumeleli, kwaye ndinako ukukufaka kubathengi bam. Kukho ixabiso elingakholelekiyo koku kodwa kunzima ukulinganisa i-ROI.
Ukukhuthaza ukuTyala kwakho kwiMithombo yeendaba yeNtlalo
Amathuba okujolisa akhethekileyo kunye nexabiso eliphantsi ngokuchofoza kwintengiso yemidiya yoluntu yenza ukuba ibe yindawo eyodwa yokukhuthaza ekufuneka uyisebenzisile. Ukuba utyala ixesha ekwakheni abaphulaphuli kwimidiya yoluntu okanye ekuhlaleni, kutheni ungaphindi kabini kutyalo-mali lwakho kwaye uqinisekise ukuba ifikelela kubantu abaninzi abakwiinethiwekhi ezifanelekileyo? Ungayichazanga eyokuba i-Facebook kunye namanye amaqonga anika ukubekwa okungcono kakhulu kunyuso oluhlawulelweyo ngaphezulu kwezinto eziphilayo!
AKUKHO konke okanye AKUKHO.
Ezinye iingcali kwimidiya yoluntu aziliqapheli ixabiso lezinye izinto zosasazo kunye neendawo zonxibelelwano ezinje nge-Twitter, i-LinkedIn, i-Facebook, njl. Bakholelwa ukuba ulichitha lonke ixesha lakho usenza into enye or enye. Bayathanda ukuthelekisa amaqonga kunye neendlela zokukhomba kwisicwangciso sabo njenge mnye kuphela ukuchitha zonke oovimba bakho kunye nokuba uza kuchitha imali nto nakwabanye.
Into endiyibonileyo kwimidiya yoluntu kukusetyenziswa okufanelekileyo kwendlela nganye ukukhuthaza amandla ayo kunye nokuphepha ubuthathaka bayo. I-Twitter yindlela efanelekileyo yokufikelela kubantu abaninzi ngenzame encinci…. kodwa ayisiyondlela isebenzayo yezihloko (ezinje ngale posi) ezifuna inkcazo eneenkcukacha ngesihloko. Ibhlog yam yindawo efanelekileyo yokufumana inkcazo eneenkcukacha. Ke-kwimizuzu embalwa i-tweet iya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo, nge Hootsuite ukuya kuthi ga ngaphezulu kwama-80,000 wabalandeli bam nabangcali… ndikhokelela iindwendwe ezininzi kubhlog yam, ezinye zabelana ngeposi, kunye nembuyekezo kutyalo-mali iya kuba ntle.
tags: ulwazelelo kwimidiya yoluntuinkonzo yabathengi kwimidiya yoluntuimbuyekezo yemidiya yoluntu kutyalo-maliimidiya yokuncokola roiintengiso yemidiya yoluntuiindleko zentengiso yezentlalo
Jun 7, 2009 ngo-9:43 AM
Iingcinga ezigqwesileyo kwi-ROI ethe ngqo nengathanga ngqo yemidiya yoluntu.
Imidiya yoluntu ngumxube wezifundo ukusuka kwi-Branding ukuya kwi-PR ukuya kwiNtengiso. I-Branding kunye ne-PR imalunga ne-ROI engathanga ngqo ngelixa iNtengiso imalunga ne-ROI ngqo.
Kodwa xa yonke le misebenzi ifakwe kwifomu enye efana nemidiya yoluntu, iinkampani kuya kufuneka ziqale zichaze ukuba zisebenzisela ntoni na imidiya yoluntu, ngaphambi kokuba zithathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwe-ROI olufanelekileyo.